Sida Loo Qoro Qoraalka Blog
Tuesday, May 17, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Tani waxay umuuqataa inay tahay qoraal dugsi hoose ah you' laakiin waad layaabi doontaa sida dad badani ay i weydiistaan ​​talo ku saabsan sida loo qoro boostada wax ku oolka ah. Waxaan sidoo kale ku dari lahaa mararka qaar aad ayaan u jahwareersanahay markaan aqriyay qoraalo qaar oo ku saabsan waxa hadafku ahaa, ku xirnaashaha wuxuu ahaa, iyo hadii blogger-ka xitaa uu ka fakarayo akhristaha asaga / ayada ay qortay boostada.
Waa maxay fikirka dhexe ee boostada? Ma jiraa jawaab aad isku dayeyso inaad siiso su'aal gaar ah? Ha ku jahwareerin dadyowga adigoo iskudayaya fikradaha kaladuwan hal bog oo qoraal ah. Mawduuca ma cajiibbaa? Waxyaabaha la xasuusto waxaa lagu qaybiyaa warbaahinta bulshada waxayna soo jiidan kartaa akhristayaal badan. Go'aanso nooca boostada waad qori doontaa.
Waa maxay keywords mala beegsan karaa boostadaada? Runta marka la sheego, had iyo jeer ma raadiyo keywords si aan kor ugu qaado markaan wax qorayo, laakiin waa hab fiican oo lagu kasbado akhristayaasha cusub. Ha ku buuxin hal tan oo keywords hal blog ah blog waa caadi inaad xoogga saarto ereyo kooban oo la xiriira.
Adeegso ereyada muhiimka ah cinwaankaaga boostada, ereyada ugu horreeya ee boostadaada, iyo ereyada ugu horreeya ee kanaga tilmaanta meta. Erayo fure ah ama ku adeegsiga cinwaano hoosaadyo, oo aad ku rusheeysid boostadaada wax weyn ayey ka beddeli kartaa sida boostadaada loogu qoro matoorada raadinta.
Ma jiraan qoraalada kale ee blogga waxaad tixraaci kartaa markaad qoraysid qoraalkaaga hadda jira? Ku xirnaanshaha gudaha qoraallada kale waxay ka caawin kartaa akhristaha inuu si qoto dheer u quusto una soo nooleeyo waxyaabo hore oo aad qortay. Xiriirinta dibedda waxay kobcin kartaa bahda kale ee warshadaha waxayna ku siin kartaa calaf dheeri ah si ay u taageerto boostadaada.
Ma jiraa a sawirka wakiil in aad ka faa'iideysan karto taas oo aragti ku reebaysa akhristaha? Maskaxdeena badiyaa ma xasuusato ereyada… laakiin waxaan ka shaqeysiinnaa oo duubnaa sawirada si ka wanaagsan. Helitaanka sawir wanaagsan oo matalaya waxyaabaha aad ka kooban tahay ayaa aragti badan kaga tagaya akhristayaashaada. Ku darista qoraal kale beddelka sawirka ayaa kaa caawin kara SEO. (Haddiise sawir u qalmo kun eray… an infographic qiimihiisu yahay 100,000 iyo a video qiimaheedu waa milyan!)
Ma qori kartaa waxyaabaha ku jira adoo adeegsanaya dhibcaha? Dadku ma akhriyaan qoraalada baloogyada illaa inta ay iska baarayaan. Isticmaalidda qodobbada, cutubyada gaagaaban, cinwaannada hoose, iyo ereyada muhiimka ah ee geesinimada leh waxay dadka ka caawin karaan inay iskaan dhigaan boostada oo ay si fudud go'aan uga gaaraan inay doonayaan inay sii qoto dheeraadaan iyo in kale.
Maxaad dadka ka rabtaa do ka dib markay aqriyaan boostada? Haddii aad leedahay baloog shirkadeed, laga yaabee inay tahay inay ku casuumaan banaanbax ama inay ku soo wacaan. Haddii ay tahay daabacaad sidan oo kale ah, laga yaabee inay tahay in la akhriyo qoraalo dheeri ah oo ku saabsan mawduuca ama lagu dhiirrigeliyo shabakadooda. (Xor ayaad u tahay inaad garaacdo badhanka Retweet iyo Like ee kor ku xusan!)
Ilaa goormaan ma tahay in bartaada blog ay noqoto? Ilaa iyo inta ay qaadanayso si aad u hesho aragtidaada - weligaa ha dheerayn. Had iyo jeer waxaan dib u eegis ku sameeyaa qoraalladeyda waxaanan arkaa inaan xoogaa ku buufiyey mawduuc - markaa waan nadiifin doonaa oo waxaan ka jari doonaa dhammaan waxyaabaha ka baxsan. Qoraal caan ah oo aan qoray ayaa ahaa 200 Blog Ideas Ideas as wuu dheeraa, laakiin wuu shaqeeyay! Haddii aan qoro cutubyo, waxaan u janjeeraa inaan ku haysto dhowr sacab oo gaagaaban ah - mid ama laba weedhood dushooda. Mar labaad, sameynta waxyaabaha si fudud loo shiidi karo waa fure.
Tag oo kala sooc boostadaada oo leh ereyo muhiim ah waxaad ubaahantahay dhagaystayaasha inay kahelaan waxyaabaha ka hooseeya. Calaamadeynta iyo kala soociddu waxay kaa caawin kartaa adiga iyo akhristayaashaada inaad ka heshaan waxyaabo fudud marka ay ka baarayaan bartaada mawduuc gaar ah. Waxay sidoo kale kaa caawin kartaa abaabulida waxyaabo dheeraad ah sida qoraallada la xiriira.
Muuji shakhsiyad iyo iyo dhiib aragtidaada. Akhristayaashu had iyo jeer ma eegaan inay jawaabo kaliya ka helaan boostada, waxay sidoo kale raadinayaan inay ogaadaan fikradaha dadka ee jawaabta. Muranku wuxuu kicin karaa wax badan oo akhris ah… laakiin noqo mid cadaalad ah oo xushmeeya. Waxaan jecelahay inaan ka doodo dadyowga ku jira boggeyga… laakiin marwalba waxaan isku dayaa inaan ku sii hayo mowduuca aan gacanta ku hayo, aniga oo aan magac u yeerin ama u ekaan dameer.
Maqaal yaab leh oo ka hadlaya dhinaca farsamada qorista iyo dhajinta barta. Macluumaad weyn oo dib loo eego KA HOR inta aanad dhajin bartaada xigta.
Haddii aan ku qiimeyno boosteejo waxa aan ka qaadno boostada boostadani waxay ku jirtaa meel sare. Boostada lafteeda ayaa tusaale u ah boostada. Tusaale ahaan, # 4 qoraallo kale oo blog ah - maxay ku jiraan 10 boostada? Mahadsanid.
Vic @ Talooyin Ganacsi Blog
Nov 11, 2011 at 9: 54 AM
Sawir wanaagsan oo si fiican u matalaya boostada ayaa ah hab fiican oo lagu hagaajin karo qoraalladayada. Waxay ka caawineysaa akhristayaasha in ay si dheeraad ah u fahmaan qoraal kasta iyada oo si fudud loo siinayo farriinta iyada oo loo marayo sawirka laftiisa.
Nov 11, 2011 at 10: 37 AM
Mahad Doug. Marnaba ma ahan fikrad xun inaad dib ugu noqoto aasaasiga sida loo qoro boostada wanaagsan. Nasiib wanaag barta aan adeegsado (Compendium) waxay iga caawisaa hagista iyo igu taageerida talaabooyinkan badankood, hadana talaabadaada koowaad waa run oo waa shaqsigeyga ugu weyn ee shakhsiyadeed markaan isku dayayo inaan qoro boostada wanaagsan. Aad bay u qosol badan tahay inaad isku xirtay fikradahaaga 200 ee qoraalka ah tusaale ahaan boostada dheer. Waa dheer tahay, laakiin si fudud ayaa loo dheefshiidi karaa waxayna ka caawin doontaa dadka in lagu fuliyo qaar ka mid ah tallaabooyinka kale ee aad halkan ku liis garaysay. Waxaan rajeynayaa in akhristayaashaadu ay hubiyaan isku xirkaas!
Nov 11, 2011 at 10: 50 AM
Haye Brian! Waad ku mahadsantahay joojinta iyo faallooyinka - waxaan rajeynayaa in wax walba hagaagsan yihiin!
Nov 12, 2011 saacadu markay tahay 2:26 PM
Thanks Doug dhammaan talooyinka. Waxaan ku cusbahay adduunka baloogyada waxaanan ku adkaaday inaan si cad oo wax ku ool ah u helo aragtidayda. Xaqiiqdii waxaan ku isticmaali doonaa tilmaamahan boggeyga soo socda.
Nov 12, 2011 saacadu markay tahay 3:54 PM
Weyn, Napolean! Noo soo sheeg haddii aad wax su'aalo ah qabtid.
27, 2011 at 6: 29 PM
Weligay ma akhrin ama ma dhajinin baloog, markaa tani waxay ahayd maqaalka ugu fiican! Waad ku mahadsan tahay sharaxaadda aasaasiga ah qaab aad loo fahmi karo.
Marka xigta, waxaan ubaahanahay inaan barto "Miyaan saxeexayaa waxan, iyo maxaa dhacaya markaan dhagsiiyo" Post as… "?
Waxaan qiyaasayaa inaan ku dhowaad ogaan doono!
BTW, waxaa laygu yaqaana CharacterMaker.